Réseau Malina 31 Desambra 2018 7344 vues
Ity lahatsoratra ity no voalohany amin'ireo nosoratana momban'ny orinasa KRAOMA S.A.
Nosoratan'i Tiana Rakotobe sy Riana Raymond
Orinasa tsara nefa tandindonin-doza
Ny taona 1948 no nahitana kraomita voalohany teto Madagasikara, tao amin’ny tananan’Androfia (Andriamena), ao antsimo antsinanan’ny faritra Betsiboka, eo amin’ny 350 kilaometatra avaratr’Antananarivo ho eo. Ny kraomita dia singa mineraly voalohan’ny kraoma, izay ampiasaina amin’ny akora simika maro, fitaovana vita amin’ny vy, ary tao-zavatra isankarazany.
Naorina ny Compagnie Minière d’Andriamena (COMINA) tamin’ny 1966 mba ahafahana mampiasa ny kraomita eo anivon’ny indostria. 20% ny ampahany an’ny fanjakana malagasy tamin’izany, ary ny ambiny kosa dia an’ny mpampiasa vola mahaleotena. Roa taona taorinan’izany ny niantombohan’ny asa, ary ny volana jolay 1969 no nisy ny fanondranana kraomita voalohany nilanja 10 800 taonina.
Niova anarana ho Kraomita Malagasy, afohezina hoe KRAOMA ny orinasa COMINA, ary nivadika ho orinasam-panjakana ny taona 1975, nandritra ny fanjakana sosialista nentin’ny filoha Ratsiraka.
Lasa “société anonyme” ny orinasa KRAOMA S.A., ny 97,17% dia an’ny fanjakana malagasy ary ny 2,83% an’ny fikambanan’ny mpiasa tao. Solontenam-panjakana ny ankamaroan’ireo mpikambana ao amin’ny filankevim-pitantanan’ny orinasa.
Raha toa ka reharehan’ny firenena nandritra ny fotoana maro ny orinasa KRAOMA S.A., izay hany indostria tokana niantsehatra teo amin’ny harena ankibon’ny tany, dia nitotongana tsikelikely izany satany izany. Niavosa ny trosan’ny orinasa rehefa nataon’ny fanjakana nifanesy fakana vola izy. Nanampy trotraka an’izany ny tsy fahaiza-mitantan’ireo mpitondra nifanesy.
Mbola niharatsy ihany izany fahasalamana ara-bola efa narefo izany tao anaton’ny fitondrana Rajaonarimampianina. Efa miha-antitra ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa, ary miha-taraiky hatrany ny fandoavana ny volan’ireo mpamatsy samihafa. Tsy voaloha intsony ny hetra izay voalazan’ny lalàna fa tokony haloha amin’ny kaominina Brieville izay toeram-pamokarana ny kraomita nanomboka ny taona 2015.
Efa tena tranainy ny fitaovana ao Brieville
Fiarahamiasa tsy mifandanja?
Izany indrindra no nahatonga ny mpitantana ny KRAOMA S.A. hitodika tamin’ny orinasa rosianina Ferrum Mining mba hanampian’ity farany azy. Nosoniavina ny 8 aogositra 2018 ny fifanarahana tamin’ny roa tonta. Eric Jean Noël RANDRASANA izay filohan’ny filankevim-pitantanan’ny orinasa no nanao ny sonia tamin’ny anaran’ny KRAOMA S.A. Anisan’ny fepetra takian’izany fifanarahana stratejika izany ny fananganana orinasa mitambatra na « joint venture » nantsoina hoe KRAOMA MINING S.A.
“Tsy nahaloa ny trosany intsony ny KRAOMA S.A., dia tsy maintsy niezaka nitady vahaolana izahay. Izany no nahatonga ny fanambàrana ny orinasa teo amin’ny KRAOMA S.A. sy ny Ferrum Mining. Ny tombotsoan’ny besinimaro no katsahanay. [ … ] Ny azo antoka dia tsy nisy ny fivarotana ny orinasa KRAOMA S.A.”, hoy ny fanazavana nomen’i Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA, filoha amperinasan’ny filankevim-pitantanan’ny KRAOMA S.A., nohadihadianay tao Brieville ny 18 desambra 2018. Toy I Eric RANDRASANA izay nodimbiasiny dia sady filohan’ny KRAOMA S.A. no Talen’ny kabinetra sivilin’ny Filoham-pirenena Andriamatoa RAMANANTSOA. Voatondro tamin’izany toerana izany izy ny volana oktobra 2018 taorinan’ny fialan’Atoa RANDRASANA.
Io volana io ihany dia dia voatendry ho Tale Jeneralin’ny orinasa vaovao KRAOMA MINING S.A. Atoa Simon Seva MBOINY, filoha teo alohan’ny STORK INTERNATIONAL eto Madagasikara, izay mpanjifa voalohan’ny KRAOMA S.A.
Ny tanjon’ny « joint venture » dia ny fampiraisana ny fananan’ny orinasa roa mba ahazoany manantanteraka asa izay tsy ho vita raha toa ka mandeha samirery izy ireo. Tsy vao voalohany no nitambatra tamin’ny orinasa iraisam-pirenena toy izao ny KRAOMA S.A. Efa nitambatra tamin’ny orinasa italianina United Technologies izy ohatra tamin’ny taona 2009, ka namorona ny United Chrome SA, saingy nijanona ny fiaraha-miasa erintaona taorian’io.
Voasotra eto Madagasikara ny KRAOMA MINING SA. Voafaritry ny fifanarahana fa ny 80%-ny orinasa ikambanana dia an’ny Ferrum Mining ary ny 20% dia an’ny KRAOMA S.A.
Kianin’ny maro izany fifampizarana ny « actions » izany satria toa mankany amin’ny orinasa rosianina ny ankamaroan’ny tombony. Anisan’ny mampisy fifanolanana ihany koa ny fanaovan-tsonia ny “contrat d’amodiation teo amin’ny KRAOMA SA sy ny KRAOMA MINING SA ny 12 septambra 2018, izay mampita amin’ny KRAOMA MINING S.A. ny fahazoan-dalana hitrandraka kraomita (na “permis d’exploitation”) telo lehibe ao Brieville (Betsiboka) mandritra ny 5 taona. Fitrandrahana kraomita 3 000 000 taonina no tanjona mandritra izany fotoana izany.
Ny 12 oktobra 2018 no nampitain’ny Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) tamin’ny KRAOMA MINING S.A ireo fahazoan-dalana 3 ireo (N°33, 45 sy 49) tamin’ny alalan’ny Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM). Nanomboka ny 22 oktobra kosa ny fitrandrahan’ny KRAOMA MINING S.A. ny kraomita .
Ny « amodiation » dia tsy fanomezam-pananana akory fa fanomezan’ny fanjakana na olon-tsotra alalana orinasa tsy miankina na vondron’olona iray ny hampiasana na hanofa ny tany iray mandritra ny fotoana voafetra ary tsy azo ivalozana. Eo amin’ny sehatry ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany ny atao hoe « amodiation » dia ny alalana omen’ny mpandraharaha ara-dalàna iray olon-kafa hitrandraka eo amin’ny taniny. Tsy toy fampanofana mahazatra izy ity satria manimba ny tany ny fitrandrahana : izay no mahatonga ny taratasy fanamarihana ho miendrika fivarotana fa tsy fifanekem-panofana.
Ny fangatahan’ny mpiasa
Nitondra fanohanana ara-teknika ho an’ny KRAOMA MINING S.A. ny Ferrum Mining tamin’ny alalan’ny mpiasany miisa sivy avy any Rosia, izay mipetraka ao amin’ny faritr’i Brieville.
Nitokona ny mpiasan’ny KRAOMA S.A. nanomboka ny faran’ny volana novambra 2018. Mitaraina ny solotenan’ny sendikà amin’ny tsy fandoavana ara-potoana ny karaman’ny mpiasa miampy ny fahasarotan’ny asa iarahana amin’ireo mpiasan’ny Ferrum Mining, izay takiany ny fialàny. Ho an’Andriamatoa Jean Sosthène RAKOTONIAINA, filohan’ny fivondronan’ny sendikàn’ny KRAOMA S.A., “nahatonga ny fitokonana ny fahataran’ny karama sy ny ora famenony maro. Mafy loatra ny roa volana niarahana niasa tamin’ny Rosianina."
Efa nanomboka taminny faraparan'ny volana novambra 2018 no nitokona ny mpiasa ao Brieville.
Nisy fifampiraharana niarahana tamin’ny Ferrum Mining, izay nanaiky nandoa ny karama volana septambra 2018 na dia tsy nanaomboka aza ny asa raha tsy ny volana oktobra. Nitaky ny famoahana amin’ny antsipirihany ny momba ny vola aloha sy ny lisitry ny mpiasa nokaramaina ny KRAOMA MINING S.A. alohan’ny handoavana ny karama volana oktobra sy novambra 2018, izay nolavin’ny mpitantana ny KRAOMA S.A.
Nalohan’ny KRAOMA MINING S.À ihany noho ny farany ny karama volana oktobra, mitentina 198 000 $ amerikanina, niampy fanafody mitentina 15 600 000 ariary. Araky ny tenin’Andriamatoa Valerii KARIAVKIN, tomponandraikitra ara-tekinika ao amin’ny Ferrum Mining, mpanolotsainan’Andriamatoa Dominique RAJOELISON, Filohan’ny fitrandrahana ao Brieville, dia tsy manohana velively ny KRAOMA MINING S.A. ny mpitantana ny KRAOMA S.A., na amin’ny fifampiresahana ara-tsosialy miaraka amin’ny mpiasa, na amin’ny fividianana ireo fitaovana sy kojakoja ilaina amin’ny fitrandrahana ny toerana. “Tsy mifampiraharaha amin’ny foiben’ny KRAOMA S.A. ao Antananarivo mihitsy izahay hatreto", hoy ihany Atoa KARIAVKIN.
Ireo fifanarahana roa sosona dia milaza fa tsy maintsy hisy ampahan’ny mpiasan’ny KRAOMA S.A. ho afindra amin’ny KRAOMA MINING S.A.. Nilaza ny Tale Jeneralin’ny KRAOMA MINING S.A., tao anatin’ny taratasy nalefany ho an’ny KRAOMA S.A. ny 23 novambra 2018, fa “nandritran’ny fifampidinihina dia nifanaiky ny roa tonta fa tsy hanarama afatsy ny mpiasan’ny KRAOMA S.A. miasa ao amin’ny orinasa ao Brieville ny Ferrum Mining. Tsy voakasik’io fifanarahana manokana io ny mpiasan’ny birao foibe” hoy Andriamatoa MBOINY. Tsy afaka handoa ny karaman’ny mpiasa rehetran’ny KRAOMA S.A. noho izany ny tanteraka ny fampandoavana ny KRAOMA MINING S.A. satria raha misy izany dia ho very ny antompisian’ny KRAOMA S.A., ary ho voaendrikendrika ho nividy tanteraka ny KRAOMA S.A. eo koa ny Ferrum Mining.
Na dia nampitaina taminy ny 19 oktobra 2018 aza ny fifanarahana « hanomezana » ireo ampahana mpiasa dia tsy nanaiky nanao sonia izany ny mpitantana ny KRAOMA S.A. Ho an’ny mpiasa sasany dia toa fanerena ankolaka ataon’ny KRAOMA MINING S.A. mba hanaovana io sonia io ny fisian’ny fahatarana teo amin ‘ny resaka karama. Matahotra ny sendikà fa ho roaana ireo mpiasa tsy nalefa any amin’ny KRAOMA MINING S.A. ireo. Ny andro mialohan’io nefa, nandritran’ny fivorian’ny solotenan’ny Ferrum Mining sy ny mpitantana ny KRAOMA S.A. ary ireo solotenan’ny sendikàn’ny KRAOMA S.A. dia nanazava ny Ferrum Mining fa tsy mieritreritra ny hanolo na hanafoana toerana ao amin’ny orinasal izy. Raha ohatra ka tsy afaka handoa ny karaman’ireo mpiasa ambiny ireo ny KRAOMA S.A. noho ny tsy fahampian’ny vola eo ampelatanany dia nanolo-kevitra ny hindraman’ny KRAOMA S.A. vola aminy ny Ferrum Mining. Izany vola izany dia ho averina amin’ny alalan’ny tombombarotra mety ho azo ao amin’ny KRAOMA MINING S.A..
Ho an’Andriamatoa MBOINY dia ny Tale Jeneraly mpanolo toerana vonjimaikan’ny KRAOMA S.A., Andriamatoa Terji RAKOTONDRAZAFY, no mpitarika ny fitokonana, noho ny antony izay heveriny fa « manjavozavo ».
Fifanarahana be mpanakiana
Tsy ara-tsosialy ihany kanefa ny fangatahan’ireo mpitokona. Voakiana ao anatin’izany ihany koa ny fifanarahana miaraka amin’ny orinasa Ferrum Mining. Ho an’ny Filohan’ny fivondronan’ny sendikà, “Efa ho 50 taona izao no nisian’ny fitrandrahana tao Brieville sy Andriamena. Niala tao ny vazaha tamin’ny taona 1980 ary nanomboka teo dia Malagasy no nitantana ny orinasa, ary tsy nisy ny olana. Tsy mila vahiny izahay, anananay ny traikefa mikasika ny fintrandrahana [...] Tsy hitsahatra ny fitokonana raha tsy foana ny fiarahamiasa amin’ny Rosianina.”
Milaza kosa Andriamatoa KARIAVKIN fa “Nizotra tsara ny fiiarahamiasa tamin’ny mpiasa (tao Brieville) ny volana novambra. Tsy nahitana olana izany talohan’ny nahatongavan’ny solotenan’ny sendikà avy amin’ny birao foibe.” Inona ary ny antony hitakian’ny sendikà ny fialandrizareo ? “Sendikà inona ?” hoy Andriamatoa KARIAVKIN. “Tsy fantatray ireo olona ireo. Tsy miresaka aminay mihitsy ry zareo. [...] Nitana ireo teny nomenay izahay, nataonay sonia avokoa ny taratasy rehetra [ndlr : anisan’izany ny taratasy nanamarina ny fitazonana ny tombotsoa ara-tsosialin’ny mpiasa].” Aminy dia misy mandrahona ambadika ireo mpiasa ireo mba tsy hiara hiasa amin’ny Rosianina.
Raha nihaona taminay tao anatin’izao fanadihadiana izao Andriamatoa RAMANATSOA, Filohan’ny Filakevi-pitatanan’ny KRAOMA S.A., dia nanamarika fa “tsy mahalala ny fomba amam-panao malagasy ny mpiasan’ny Ferrum Mining, ka izany no anisan’ny nampisy tsy fifaliana sy nitaraka ny fitokonan’ny mpiasa”. Ho an’Andriamatoa RAMANANTSOA dia olana hafa mila vahana ihany koa ny fizarazaran’ny fananana petrabola ao ami’ny orinasa natambatra. “Hita fa mbola betsaka ny zavatra mila havaozina ny hatsaraina raha tena hiditra amin’ny fanantanterahana io fifanekena io isika” hoy ihany izy.
Notakian’ny Ministeran’ny vola sy tetibola, amin’ny maha- mpanaramaso ara-bola manokana an’ny KRAOMA S.A. azy, ny fampifandanjana ny fifanarahan’ny KRAOMA S.A. sy ny Ferrum Mining,
Tao anatin’ny taratasy nalefany ho an’ny Tale Jeneraly vonjy maikan’ny KRAOMA S.A., voarainity farany tamin’ny 20 desambra 2018, dia nomarihin’ny Minisitry ny vola sy tetibola fa “raha ny zavamisy no dinihina dia toa tsy manampy veliveky amin’ny fanarenana ny KRAOMA S.A. ny fifanarahana fiara-miasa sy ny fifanarahana fampanofana (amodiation). Noho izany, voninahitra ho ahy ny mangataka mba handray fepetra hentitra hijerena indray ireo voalaza ao anatin’ny fifanarahana fiarahamiasa, indrindra ny fampidirana antoka ao amin’ny foto-karena sosialy na kaonty’ny mpametra-bola rehefa avy nosandain’ny kaomiseran’antoka, ny famarotana ireo fitaovana sy kojakoja ary ny fomba fitsinjarana ny vola miditra amin’ny orinasa vaovao. Mikasika ny fifanarahana fampanofana tany, ny karaman’ny mpiasa dia tsy tokony ho tafiditra ao anatin’ny tombotsoa mazava zaraina araky ny voalaza ao anatin’ny fifanarahana fiara-miasa.” Izany dia toa kapoka mahamay ho an’ireo mpitantana ny KRAOMA S.A. izao voapanga ho tsy nitandrina firy ny tombotsoan’ny orinasa tamin’ny nananganana ny orinasa itambarana KRAOMA MINING S.A.
Ahiahy amin’ny fisiana kolikoly
Semban-drahona io fiaraha-miasa izay tokony hanavotra ny orinasa KRAOMA S.A. amin’ny fatiantoka io. Heverina fa ny tsy fahaizan’ny KRAOMA S.A. niady hevitra sy ny faharefon’ny tetibolany no anisan’ny nahatonga ny tombotsoan’ny roa tonta ho samihafa, toa mitania kokoa any amin’ny Rosianina. Toa mampiahiahy na izany aza ny nisafidianana mivantana ny Ferrum Mining, tsy nanaovana « appel d’offres ». Sao mba nisy kolikoly niteraka tombontsoa mivantana ho an’ny filoha teo aloha Hery RAJAONARIMAMPIANINA tao ? Tsipahan’Andriamatoa KARIAVKIN izany ahiahy izany. Hoy mantsy izy : “Tsy manao afatsy ny miasa izahay [...] Hamokatra ny ataonay eto, izay ihany.” Andriamatoa MBOINY, Tale jeneralin’ny KRAOMA MINING S.A. kosa dia milaza fa tsy nilaina ny « appel d’offres » satria ny KRAOMA MINING S.A. dia miasa ao anatin’ny fari-piasan’ny KRAOMA S.A. ihany fa tsy manana fahazoan-dalana hitrandrakana amin’ny anarany manokana izy. “Tsy mitondra afatsy vola izahay [...] Tsy hitanay izay ilàna appel d’offres”. Araky ny fanazavan’Andriamatoa MBOINY dia hampiasa vola 16 tapitrisa dolara amerikanina i Ferrum Mining amin’ny alalan’ny KRAOMA MINING S.A., mba hividianana fitaovana ilaina amin’ny famokarana. Raha ny filazany dia tsy misy ifandraisany amin’ny sanda fanonerana arotsaky ny KRAOMA MINING S.A. amin’ny KRAOMA S.A. mikasika ny fampanofana ireo fahazoan-dalana hitrandraka ao Brieville, izay nankalazain’ny gazety volana vitsivitsy lasa izay, io fampiasam-bola io. Satria moa tsy nahazo ny taratasy fifanarahana fampanofana iray manontolo izahay, dia tsy afaka namakafaka ny tena anton'izao fanonerana ara-bola izany tao anatin’ity fanadihdiana ity.
Na dia tsy mbola miodina afatsy amin’ny ampahan’ny heriny aza ny orinasa, dia kraomita 12 000 taonina no efa novokarin’ny KRAOMA MINING S.A. hatramin’ny namerenany ny famokarana, ary nafindra toerana ao amin’ny toby ao Toamasina ny ampahany amin’ny akora vokatra. Efa mila hahatratra 3 000 000 dolara amerikanina no lanin’ny Ferrum Mining hamelomana indray ny famokarana. Naniry ny hijanona any an-toerana ireo mpiasan’ny Ferrum Mining eto Brieville hiantoka ny fanondranana ara-potoana ny vokatra efa novinavinaina na dia teo aza ny fitokonana. Saingy noho ny fifandirana mihamafy amin’ny mpiasa dia tsy maintsy nampodiana any Antananarivo ihany izy ireo.
Nosoloin’ny Filakevi-pitantanan’ny KRAOMA S.A. an’Andriamatoa Jaobarison RANDRIANARIVONY, izay anisan’ny lohandohan’ny mpisorona ao amin’ny ekipan’ny HVM ohatran’Andriamatoa RANDRASANA, Andriamatoa RAKOTONDRAZAFY, Tale Jeneraly vonjimaika teo aloha. “Momba ny fifampiraharahana izahay. Manaiky izahay raha misy zavatra hatsaraina amin’ilay fifanarahana. Manaiky izahay raha misy zavatra mila hovaina” hoy Andriamatoa MBOINY. Noho ny fisalasalana sy ny ahiahy maro nipoitra teny rehetra teny kanefa, dia tsy azo antoka ny hahatontosa tanteraka ity fiaraha-miasa miaraka amin’ny Ferrum Mining ity...
Ady tanin'ny Sirama: tsy taitra akory ny fanjakana nefa vola amina miliara no tsy hita